Artistes take minister to task - DailyNews Live
Letwin Nyambayo • 10 November 2013 9:31AM • 3 comments
BULAWAYO - Andrew Langa, Sports, Arts and Culture minister, disappointed Bulawayo artistes when he allegedly failed to articulate plans for the arts industry during next year’s Zone Six Youth Games.
ko minister ka havatombozivi nezveministry yavo. Dont worry he will learn in 5yrs tym.
mwana wapresident - 10 November 2013
Enduro akagara riridofo kuchikoro saka musatarisira zvakawanda. Chinzvimbo chaanacho akachiwana nokutengea vamwe mubato.
Enduro akagara riridofo kuchikoro saka musatarisira zvakawanda. Chinzvimbo chaanacho akachiwana nokutengesa vamwe mubato.